आमा बन्न संस्कार सिकेर आउन श्रेयालाई आग्रह, आमासंग छोरी खुशी छैन र हुदैन ! श्रेयाको मान्छेको आयो ध*म्कि (हेर्नुस् भिडियो) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/आमा बन्न संस्कार सिकेर आउन श्रेयालाई आग्रह, आमासंग छोरी खुशी छैन र हुदैन ! श्रेयाको मान्छेको आयो ध*म्कि (हेर्नुस् भिडियो)
आमा बन्न संस्कार सिकेर आउन श्रेयालाई आग्रह, आमासंग छोरी खुशी छैन र हुदैन ! श्रेयाको मान्छेको आयो ध*म्कि (हेर्नुस् भिडियो)
सामाजीक संजालमा अहिले निकै चर्चा पाईरहेको बिषय हो विजय सुबेदी र उनकी पुर्व पत्नी श्रेया कार्कीको छोरी खुसी सुबेदीको बिषय । क्यानाडामा जन्मिएकी खुसीलाई लिएर बाबु आमाबीचनि ताना तान भइरहेको छ । तर घटना भएको यत्रो दिन बितीसक्दा पनि के कुरामा यो सब भइरहेको अझै कसैले पनि यसबारे स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन सकेका छैनन् । यसै घटनाको बारेमा श्रेया कार्की र उनका पुर्व पति विजय सुबेदीका पक्ष र विपक्षमा धेरैले आफ्ना धारणा राखीसकेका छन् ।
ललितपुरमा घटेको यो घटनाको बारेमा बिनयजंग बस्नेत पनि मिडियामा आएर उनले यो सब हुनु पछाडीको यथार्थ खोलेका छन् । जब छोरीलाई आमाको स्नेह चाहिएको थियो त्यति बेला श्रेया उनको छोरी खुशीको साथमा नभएर अहिले किन आईन् भन्ने प्रश्न गरेका छन् । छोरी ठुली भएपछि आउनुमा आमा श्रेयाको स्वार्थ नै रहेको उनले बताएका छन् ।
जन्म दिएर र आमा बन्न खोजेर मात्र नहुने तर आमा हुनुपर्यो भन्ने उनको तर्क छ । उनका घर परिवारले खुशीको खुसी चाहेको बताउंदै बिनयले श्रेयालाई आमा बन्न संस्कार सिकेर आउन आग्रह गरेका छन् । साथै, उनले आमासंग छोरी खुशी छैन र हुनेछैन भन्दै बितेको समय फेरी फर्केर नआउने र आमाको काख गुमाएकी छोरीलाई उनकै घरको जिम्मा दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले बताएका कुराहरु हेरौं भिडियोमा :
टिप्परले ठक्कर दिंदा मोटरसाइकलमा सवार श्रीमतीको निधन श्रीमान गम्भीर घाइते
अछाममा आरडीटी गरेर घर पठाइएका एक व्यक्तिको मृत्यु
जापानमा कोरोना संक्रमित निरन्तर बढ्दै ,२४ घण्टामा एक हजार भन्दा बढि थपिए